နာနာ‌လေးကစ်တဲ့ နာဂစ် - ၁
အခုတလော ဂျပန်ငလျင်၊ရှမ်:ပြည်က ငလျင်တွေ မြင်ရတော. ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ.ရတယ်. ဆိုင်ကလုန်းနာဂစ် အကြောင်း အမှတ်ရမိပါတယ်။ ၂၀၀၈ ဧပရယ် ၂၇ မှာ စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ.တယ်. လေဖိအားနည်:ရပ်ဝန်:ကနေ မေ ၂ ရက်နေ့ မှာတော. အားအလွန်ကောင်းတယ်. ဆိုင်ကလုန်းနာဂစ် အဖြစ် ရောက်ရှိခဲ.ပါတော.တယ်။ တစ်နာရီ လေပြင်းတိုက်ခတ်နှုန်: ၁၀၅ မိုင်ကနေ ၁၃၅ မိုင်အထိ တိုက်ခတ်တာ။ မိုင် ၁၀၀ ဆိုရင်တောင် အပင်တွေ အမြစ်အကုန်ကျွတ်အောင် ပြင်းတာ။ မုန်တိုင်းမတိုက်ခင်အထိ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပဲ ဝင်မလိုလို၊ အိန္ဒိယပဲ ဝင်မလိုလိုနဲ. နောက်ဆုံး မြန်မာပြည်ကို ဝင်မွေသွားတော.တာပဲ။ မိုင် ၇၀၊၈၀ ဆိုတယ်.အချိန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ. အိန္ဒိယက ရက္ခာတွ စုဆောင်းပြီ: မုန်တိုင်းအတွက် ပြင်ဆင်နေပြီ။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ ဖြစ်သမျှ မုန်တိုင်းတွေက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကို ဝင်လေ့ရှိတာမို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က မုန်တိုင်းပါးဝနေပြီ။ မိုင်၁၀၀ ဘယ်ကို ဝင်မွှေမယ်မှန်: မသိခင်ကတည်:က မုန်တိုင်း သတိပေးချက်တွေ ထုတ်ပြန်ပြီ: ပြည်သူတွေကို ရှောင်ခိုင်းနေပြီ။ တို.များ အစိုးရကတော. ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို. ဝေးရော၊ တုတ်တုတ်မှ မလှုပ်၊ မဲဆွယ် ကောင်းနေတာများ မြန်မာပြည်ကို ဝင်မယ်ဆိုတာ သေချာတော.မှ သတိပေးရှာပါတယ်။ တီဗီ ဖန်သားပြင် အောက်နားမှာ "ဟိုင်းကြီ:ကျွန်းရဲ. အနောက်တောင်ဖက် မိုင်၁၅၀ အကွာ ပင်လယ်ပြင်ကို ဗဟိုပြု၍ အားအလွန်ကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းနာဂစ်သည် နောက် ၄၈ နာရီ အတွင်း မြန်မာပြည်ကို ဝင်ရောက် တိုက်ခတ်ပါမည်။ ယင်းမုန်တိုင်းကြီ:ရှိန်ကြောင့် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်နဲ. ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မိုးသည်:ထန်စွာ ရွာသွန်းပြီ: ရေပြင်မြေပြင်လေသည် တစ်နာရီ မိုင် ၁၀၅မှ ၁၃၅ အထိ တိုက်ခတ်နိုင်ပါသည်။" ဆိုတယ်. စာတန်:လေးဟာ အဆတ်မပြတ် ပေါ်လာပါတော.တယ်။ မုန်တိုင်း ရန်ကုန်ကို ဝင်မယ်.နေ့က တချို. ရုံးတွေ၊ကျောင်းတွေက နေ့တဝက် ဆင်းပေးလိုက်တယ်။
မြန်မာပြည် အနောက်တောင်ဖက်စွန်: နဂရေ့အငူနားက ဧရာဝတီတိုင်းထဲက ဟိုင်းကြီ:ကျွန်းကလေးက တို.ဇာတိပါ။ မိဘများလည်: လက်ရှိ နေထိုင်ဆဲပါ။ စိတ်ပူလို့ ဖေ့ဆီ ဖုန်းဆက်မေးတော. "လေတိုက်တာ တအားပဲ။ လေကို ကျောခိုင်းနေရတယ်။ နေလို့ မရတော.ဘူး။" ဆိုပြီ: ဖုန်းကျသွားတော.ပါပဲ။ တို.မှာလည်: မိသားစုဝင်လေး ၅ယောက်ပဲ ရှိတာ ဖေနဲ.မေက ဟိုင်းကြီ:မှာ၊ မကြီ:က စကင်္ာပူမှာ၊ မောင်လေးနဲ. တို.က ရန်ကုန်မှာ။ မုန်တိုင်းဝင်မယ် သိတာနဲ. ရေတင်ထား၊ ဆန်၊ရိက္ခာခြောက် ဝယ်ထားရတယ်။ မြန်မာ့အမှောင်နဲ. မြန်မာ့ရုပ်မမြင်အသံမကြားကို ကြည့်လို့ကတော. ဘယ်တော.မှ သတင်းအမှန် သိရမှာမဟုတ်လို့ ရေဒီယိုကို ဖွင့်ပြီ: နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနကနေ လွှင့်တယ်.မုန်တိုင်းသတင်း နားစွင့်ရတယ်။ တီဗီဆိုတာလည်: ကိုရီးယားကား ကြည့်ရုံပါပဲ ပျင်းဖို.ကောင်:တယ်. အစီအစဉ်တွေနဲ. ဆောက်လိုက်တယ်. ရေကာတာ၊ဖွင့်လိုက်တယ်. တံတား၊ တိုးတက်နေတာများ တီဗီထဲမှာ ပြောပါတယ်။ တိကျမြန်ဆန်တယ်. သတင်းရချင်ရင် ရေဒီယိုကနေ နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေကို နားထောင်ပါ။ မြန်မာ့ရုပ်မမြင်အသံမကြားမှာ အမြဲစောင့်ကြည့်ရတယ်. အစီအစဉ်တခု ရှိတယ်။ ဦးထွန်းလွင်ရဲ. လပတ်မိုးလေဝသအစီအစဉ်။ ဦးထွန်းလွင်က ရှေ့လမှာ လေဖိအားနည်:ရပ်ဝန်: ၂ခု ဖြစ်ပေါ်ဖို. ရှိတယ်။ ၁ခုကတော. မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်ချေ ရှိတယ် လို့ ခန်.မှန်:ရင် သူမှန်:တယ်.အတိုင်း မလွဲဘူး။ တခြားလူတွေအတွက် မုန်တိုင်းသတင်းက အရေးမကြီ:ပေမယ်. ပင်လယ်ပြင်ကို မှီပြီ: အသက်မွေးရသူတွေ အတွက်ကတော. မုန်တိုင်းသတင်းက အသက်ထက် အရေးကြီ:ပါတယ်။ မေ ၂ ညနေမှာတော. ရန်ကုန်မှာ မိုးစရွာပါပြီ။ ဆိုင်ကလုန်းနာဂစ် ရန်ကုန်ဆီ ရွေ့လာပါပြီ။ ရှိတယ်. ပိုက်ဆံကို စလွယ်သိုင်း အိတ်ထဲထည်. ကိုယ်နဲ.မကွာထားပြီ: အိပ်။ မနက်၄နာရီလောက်မှာ လေတိုက်တာ တိုက်တောင် သိမ့်သိမ့်တုန်တယ်။ တိုက်များ ပြိုလေမလာ: တွေးကြောက်တယ်.စိတ်နဲ. စောင်ကို ခေါင်းမြီးခြုံရင်း သဗုဒ္ဓေဂါထာကို အမြီးအမောက်မတည်.အောင် ရွတ်။
အောက်ထပ်ကိုလည်: ဆင်းကြည့်ရသေးတယ်။ မိုးသည်:ရင် မြောင်းတွေက ရေမဆင်းတော.လို့ တိုက်ခန်:ထဲကို ရေဝင်တာ အမြဲလိုပါပဲ။ အောက်ထပ်နေသူများရဲ. ဒုက္ခ။ မီးဖွင့်လိုက်တာနဲ. မီးမလင်း။ မုန်တိုင်းဝင်ရင် လျှပ်စစ်ဌာနက ဝါယာလျှော.ဖြစ်မှာစိုးလို့ မီးဖြတ်လိုက်ပြီ။ တီဗီကေဘယ်ကြိုးကို ရေလွတ်တယ်.နေရာတင်၊ နံရံမှာ ရေတွေ စီးကြလာလို့ ပစ္စည်းတွေကို ဟိုရွှေ့၊ဒီရွှေ့။ ကျတယ်.ရေတွေများလာလို့ အပြင်ထွက်ပြီ: ကြည့်လိုက်တယ်.သကာလ လာ:လား ...အိမ်ခေါင်မိုး မရှိတော.ပါလား။ အပေါ်ထပ်က လူတွေ ဘယ်လိုများ နေကျပါလိမ့်။ လေတအားတိုက် မိုးကသည်းလို့ ချမ်:အေးရတယ်.အထဲ အမိုးအကာမရှိဘဲ မိုးရေထဲမှာ ဘယ်လိုများ နေကြပါလိမ့်။ အပြင်ထွက်ပြီ: စနည်းနာနေတယ်. မောင်မောင်ကို အိမ်ထဲအတင်း ဝင်ခိုင်းရတယ်။ လေက တဝှီးဝှီးတိုက်ပြီ: သွပ်ပြာ:တွေ ပျံဝဲနေတာ။ တော်ကြာ နောက်နေ့ သစ်စရာ မျက်နှာ မရှိပဲ ဖြစ်နေဦးမယ်။ ဘေးအိမ်က မဇင်မာက "စန်:ထွန်းရေ တိုက်ပြိုမလား မသိဘူး။ ဘုန်းကြီ:ကျောင်း သွားခိုရအောင်" တယ်.။ "လေက ဒီလောက် တိုက်နေတာ ဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်အောင် မနည်:သွားရမယ်။ ငါတို.လည်: ရှိနေတာ။ စိတ်မပူနဲ.။ ပြေးရင် အတူပြေးကြမယ်" ဆိုတယ်. ဘေးအိမ်က အန်တီဆွေ ပြောမှပဲ အကြောက်နည်:နည်: သက်သာတော.တယ်။ မိုးမရွာတော.ပဲ လေက ဝှေ့ရမ်:တိုက်နေတာ သစ်ပင်ပိ၊ လွင့်လာတယ်. သွပ်ပြားရှတာနဲ.တင် ဘုန်းကြီ:ကျောင်းရောက်ဖို. နေနေသာသာ လမ်:မှာတင် အသက်ပျောက်သွားနိုင်တယ်။ ရေကလည်: အိမ်ထဲမှာတင် ဒူးဝက်ရောက်တယ်။ လမ်:တွေမှာတော. ပေါင်လယ်လောက် ရောက်တယ်။ ဘယ်နေရာ ကြည့်ကြည့် အပျက်အစီးပုံတွေ။ နောက်ဖေးက စလောင်းကတော. မြောင်းထဲ ရောက်သွားရှာပြီ။ တယောက်တည်:နေတယ်. မဇင်မာက တို.တွေနဲ. လာပေါင်းရှာတယ်။ မနက်၁၀နာရီလောက်မှာ တိုက်လိုက်တယ်.လေ။ ညနေစောင်းမှပဲ သက်သာတော.တယ်။ တမြို.လုံးလည်:ကုန်ပြီ။
ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် အပျက်အစီးတွေ။ ဘယ်စစ်တပ်၊ဘယ်ကြံ.ဖွတ်က လာမကူပါဘူး။ ကိုယ်.ပတ်ဝန်းကျင်၊ကိုယ်လမ်: ကိုယ်ဘာသာရှင်းပဲ။ လမ်:ပေါ် လဲကျနေတယ်.သစ်ပင်တွေ၊ ဟိုဒီက လွင့်လာတယ်. အမှိုက်တွေနဲ. လမ်:က သွားလို့တောင် မရဘူး။ ရှိသမျှ အမှိုက်တွေကို လမ်:မထိပ်မှာ လာပစ်ကြတော.တာပဲ။ လမ်:ထိပ်လာ မပစ်လို့လဲ ဘယ်နေရာ သွားပစ်ရမှာလဲ။ ရေနည်:နည်:ကျတာနဲ. အိမ်ကို ရေဆေးချ၊ ပတ်ထုတ်။ ရေကျချိန်မှာ ဆေးမချရင် နုန်းတွေနဲ. နောင် ဆေးချဖို.မလွယ်တော.ဘူး။ မောလိုက်တာ ဖတ်ဖတ်မော။ ဖြိုးတို. မောင်နှမ ၂ ယောက် ရောက်လာပြီ: သတင်းလာမေးရှာတယ်။ လိုင်းကားတွေ မထွက်လို့ ၃ မှတ်တိုင်ကို လမ်:လျှောက်လာရတယ်။ ညဖက် BBCက ရေဒီယို နားထောင်တော. ဟိုင်းကြီ:ကျွန်းမှာ ၁၅၀ လောက် သေတယ် ဆိုတယ်. သတင်း နားထောင်ပြီ: မောင်နှမ၂ယောက် အိပ်နေရာကနေ ငေါက်ကနဲ ထထိုင်တော.တာပဲ။ ဖေ၊မေ တိမ်:ပါးသွားရင် တို.များ ဘယ်လို လုပ်ရပါမလဲ ။ ရေဆေးချ၊ အမှိုက်ရှင်းနေလို့ အလုပ်များနေတာနဲ. ဟိုင်းကြီ:ကို မေ့နေတာ။ အခုတော. စိတ်ပူလိုက်တာ တအားပဲ။ သတင်းကြားကြားချင်း ခေါင်းနပန်: ကြီးသွားတယ်ဆိုတာ အမှန်ပဲ။ ကောင်းနေသေးတယ်. ဖုန်းတွေ လိုက်ဆက်တော. ကိုသိန်:ဝင်းက ပုသိမ်ဆင်းဖို. ရှိတယ်။ ကားနောက်ခန်:ကနေ လိုက်လို့ရတယ်တယ်.။ မောင်မောင် သုံးဖို. ပိုက်ဆံနည်:နည်: ချန်ထားပြီ: ရှိသမျှ ပိုက်ဆံကို ထည်.။ မောင်မောင်ကလည်: လမ်:မှာ စားဖို. မုန့်ခြောက်၊ ရေဘူး၊ ကျောပိုးအိတ်ကို ပြင်ပေးရှာပါတယ်။ သူ့မှာလည်: စိတ်ပူနေတာ ပါးစပ်ကသာ ထုတ်မပြောရှာတာ မျက်နှာက ဆီးရွတ်လောက်ပဲ ရှိတော.တာ။ ရန်ကုန်၊ပုသိမ် ကားလမ်:တလျှောက် တွေ့ရတယ်. မြင်ကွင်းတွေက စိတ်မချမ်:သာစရာ။ နေရာတကာ အပျက်အစီး အပြိုအလဲ။ မန်တလေ:က ပြာပုံ၊ ရန်ကုန်က အမှိုက်ပုံ၊ နေပြည်တော်က အရိုးပုံဆိုတယ်. တဘောင်လိုလိုက မှန်နေပြီလား။ မကြာခင်ကပဲ မန်:တလေး ရတနာပုံဈေးကြီ: မီးလောင်ထားတာ။
အခု ရန်ကုန်က အမှိုက်ဆိုတာကလည်: မှန်နေပြီ။ နေပြည်တော်ကတော. ဘယ်လို အရိုးပုံမလဲ မသိတော.ပါ။ ဓာတ်ဆီက ရန်ကုန်မှာ ဝယ်လို့ မရတော.ဘူး။ မြို.ပြင်ရောက်မှပဲ ဝယ်လို့ရတော.တယ်။ ပုသိမ်ကတော. မုန်တိုင်းဒဏ် မခံရဘူး။ ရန်ကုန်က ဟိုင်းကြီ: အဆက်အနွယ်တွေ ပုသိမ်ကို ဆင်းလာကြပြီ။ အောက်ဖက်က သတင်းတွေကလည်: ပုသိမ်ကို တက်လာပြီ။ ဟိုင်းကြီ:တကျွန်းလုံး မြုပ်သွားပြီ။ တယောက်မှ မရှင်ဘူး။ ဘိုကလေး၊ လပွတ္တာမှာ အခြေအနေ တော်တော်ဆိုးတယ်။ မနေ့ကတော. ကယ်ဆယ်ရေး သင်္ဘော ဆင်းသွားပေမယ်. ဘယ်အရပ်သားမှ လိုက်ခွင့်မပေး။ ဒီနေတော. လျှပ်ပြေး(တို.နယ်အခေါ် တကယ်တော. Speed Boatပါ) ဆင်းမယ် ဆိုလို့ လက်မှတ်ကို အလုအယက်ဝယ်။ ဈေးကြီ:ထဲ လိုမယ်ထင်တာတွေ ပြေးဝယ်။ ညနေစောင်းတော. ဒဏ်ရာရသူတွေ တင်လာတယ်. လျှပ်ပြေး ဟိုင်းကြီ:ကနေ ပုသိမ်ကို တက်လာပြီ ဆိုတယ်. သတင်းကြားတာနဲ. ဟိုင်းကြီ: အဆက်အနွယ်တွေ ကမ်:နားဆိပ်မှာ စောင့်နေတာ တိုးမပေါက်အောင်ဘဲ။ ဘယ်သူရေ ဘယ်ဝါရေ... ဘယ်သူတွေကတော. ပါသွားပြီ ဆိုတယ်. အသံတွေ ပွက်လောရိုက်နေချိန်မှာ တက်လာသမျှ လူတွေ ကိုယ်ကမသိ။ ကဗ္ဗလာ၊ချောင်းဝ၊ပြင်ခရိုင်၊ကျောက်ချောင်း၊ခမောက်မော် ကိုယ်.အနီးအနား ရွာတွေကလည်: အများကြီ:။ ကိုယ်မသိတယ်. ရွာတွေကလည်: အများကြီ:။ ဘယ်သူကို မေးရမှန်:မသိ။ ကိုယ်.ရွာသားကိုလည်: မတွေ.။ ရန်ကုန်မှာ နေတာကြာတော. ကိုယ်.ရွာသားကလည်: ကိုယ်.ကို မသိ။ ဟိုင်းကြီ:မှာ ကိုသန်:ဝင် ရုံက စလို့ အားလုံး ပြိုံကုန်ပြီ ဆိုတယ်. စကားကြားလိုက်ရတယ်. ခဏ ခေါင်းထဲ မိုက်ကနဲ ဖြစ်ပြီ: ကမ္ဘာကြီ:က ခဏရပ်သွားသလို ခံစားရလိုက်တယ်။ ဘုရား ဘုရား ဖေနဲ. မေ အသက်မှ ရှင်ပါသေးရဲ.လား။
မတ် ၂၆၊ ၂၀၁၁။
အမေရိကန်တွေရဲ. စကားထဲမှာ ပါနေကျက F***,Crap။ စလုံးမှာ တ lah lah လို့ ပြောသလို USမှာလည်: တ F*** F*** နဲ.။ စလုံးမှာ "What lao" USမှာတော. "Crap" တဲ. ။ခွဲခါနီး နှုတ်ဆက်တာက စလုံးမှာတော. "Bye Bye"၊ USမှာတော. "Haveagood day." တဲ.။စလုံးတွေက Complaint တက်ဖို. ဝန်မလေးသလို အမေရိကန်တွေကလည်: ချီးမွမ်:စကား ပြောဖို. ဝန်မလေးဘူး။ ချီ:မွမ်:စရာ မရှိရင်တောင် ကြံဖန်ပြီ: ချီ:မွမ်:နေတာများ ရာသီဥတုတောင် အလွတ် မပေးဘူး။
Middle East နိုင်ငံသူကို အမေရိကန်တယောက်နဲ. မိတ်ဆက်ပေးတယ်.အခါ ကမ်:ပေးတယ်. အမေရိကန်ရဲ. လက်ဟာ လေထဲမှာ အိုးတိုးအမ်:တမ်: ရပ်သွားဖူးတယ်။ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ မိန်:ကလေးတွေကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လေ့ မရှိပါဘူးတယ်.။ US မှာတော. လက်ဆွဲနှုတ်ဆတ်တာ၊ပွေ့ဖက်တာ၊ပါးချင်းအပ်တာက နှုတ်ဆတ်ခြင်းပါ။
အမေရိကန်နဲ. အာရပ်တွေ စကားပြောကြရင် အာရပ်က စကားပြောရင်း ရှေ့တိုးတိုးလာ အမေရိကန်က စကားပြောရင်း နောက်ကို ဆုတ်ဆုတ်နဲ. အတော်.ကို ဂွကျပြီ: ကိုးယိုးကားရား နိုင်တယ်. အဖြစ်။ ဖြစ်ရပုံက အာရပ်တွေက စကားပြောရင် နီးနီးလေး ကပ်ပြောကြသတဲ.။ အမေရိကန်တွေကတော. မနီးလွန်း၊မဝေးလွန်: အကွာအဝေးနဲ. ပြောကြသတဲ.။
ဗီယက်နမ်နဲ. နီပေါကတော. တွေ့တာနဲ. အသက်မေးတော.တာပဲ။ အာရှယဉ်ကျေးမှုအရ အသက်သိမှ မဘယ်သူ၊ကိုဘယ်ဝှါ ခေါ်လို့ရမှာကိုး။ ဒီလို ခေါ်မှ ယဉ်ကျေးတာလေ။ US မှာတော. အသက်၊ Personalမမေ:တာကမှ ယဉ်ကျေးတာတဲ.။
လက်ချင်းချိတ်ထားတယ်. အာဖရိက ကောင်လေး၂ယောက်ကို အားလုံးက စိတ်ဝင်တစားနဲ. အကဲခတ်ကြမယ်။ ဖြစ်ရပုံက အာဖရိကမှာ ခင်မင်ကြရင် လက်ချင်းချိတ်ထားတာတဲ.။ လိင်တူချစ်သူ အခွင့်အရေး ရှိတယ်. US မှာတော. လိင်တူချင်း လက်ချိတ်ထားရင် တမျိုးအထင် ခံရမယ်။ ဒါ့ကြောင်. တို.များအုပ်စုထဲကများ တယောက်ယောက်က လက်လာချိတ်ရင် လက်ညိုးလေးထောင်၊ ခေါင်းကလေးရမ်:ပြီ: "It is not good." လို့ စကြတယ်။
US မှာ လူတိုင်းဟာ သမ်မတဖြစ်ခွင့် ရှိတယ်။ ဒီကုမ်မဏီကို ဘာမှမရှိတယ်. အခြေအနေကနေ ဒီလို ဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ.တာလို့ လက်သီးလက်မောင်းတန်:ပြီ: ပြောနေတယ်. ကုမ်မဏီပိုင်ရှင် သူဋ္ဌေးများကို မြင်တွေ့ရမယ်။ အဖေက Director မို့ သားက Director ဖြစ်လာတာ မရှိ။ ယောက်ကျားနဲ. မိန်:မ အခွင့်အရေး အတူတူရှိတယ်. USမှာ CEO တာဝန် ထမ်:ဆောင်နေကြတယ်. Lady Boss တော်တော်များများကို မြင်တွေ့ရပါမယ်။
တရုတ်နိုင်ငံလို အနှစ် ၅၀၀၀ ယဉ်ကျေးမှု သက်တမ်:မရှိတယ်. USဟာ ထိန်:သိမ်:စရာ အမွေအနှစ် မရှိလို့ သဘာဝဘေးအန်တရယ် ထိန်:သိမ်:ကာကွယ်ရေးကို စောက်ချ လုပ်ကိုင်တယ်။
ဆရာမကြီ: ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ရဲ. မိတ်ဆွေ ဂျာမန်မဟာ ဘုရားတရား ကြည်ညိုလွန်:လို့ ဘယ်ခရီးသွားသွား ဘုရားဆင်းတုတော်ကို သယ်သွားတယ်။ တနေ့တော. ဂျာမန်မ ဘုရားဆင်းတု သိမ်:ဆည်:နေတာ မြင်ရတော. ဆရာမကြီ: ဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ခမျာ မျက်လုံးပြူ:သွားပြီ: ရင်ဘတ်ကို လက်ကလေးနဲ. အသာဖိလိုက်ရတယ်။ အပေါ်အတွင်းခံလေးနဲ. ဘုရားဆင်းတုတော်ကို ထုပ်ပိုးနေတာလေ။ မေးကြည့်တော. ဘုရားဆင်းတုတော်ဆိုတာ မသန့်တာနဲ. မထုပ်ရဘူး ဆိုလို့ သူ့မှာ ရှိတယ်.အထဲက အသန့်ဆုံး၊ အနူးညံ့ဆုံးနဲ. ထုပ်နေတာတဲ.လေ။ ဟုတ်တော.လည်: ဟုတ်သား သူ့အတွင်းခံက ပိုးသားဆိုတော. နူးညံ.တယ်လေ။ ဆရာမကြီ:က အတွင်းခံနဲ. မထုတ်ရတယ်.အကြောင်း သေသေချာချာ ရှင်းပြတော.မှ ဂျာမန်မက ပြန်ပြောရှာတယ်။ "It is culture chock" တဲ.။
မတ် ၂၀၊ ၂၀၁၁။
Dining Hallထဲ အစာ:အသောက် ယူတဲ.နေရာမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ လက်ဆေ:တယ်.နေရာမှာ ဖြစ်ဖြစ် ဆုံမိရင် MUM Feb intake MSCS က ကျောင်းသား၄၈ယောက်ဟာ ၅ယောက်ပဲရှိရှာတယ်. တို.များကျောင်းသူတွေကို "Lady First"လို့ မပြောသော်ငြား ခေါင်းကလေး ငဲ.၊ လက်ကလေးပြပြီ: ဦးစားပေးပါတယ်။
SCI courseပြီ: Presentation ပြီ:တယ်.အခါ နေ့လည်စာ စားပြီ:တယ်.အခါ ရေခဲမှုန့် ကျွေးပါတယ်။ မစားရတာ ၁လကြာပြီ ဖြစ်တယ်. ရေခဲမှုန့် စားဖို. သွားတယ်.အခါ ရေခဲမှုန့်နား ယောက်ျားလေးများ အုန်းအုန်းထနေပါတယ်။သူတို.နဲ. အတူဝင်မတိုးနိုင်လို့ အနားမှာ အသာလေးရပ်ပြီ: "Lady first" လို့ ပြောလိုက်တယ်. သကာလ ပါကစ္စတန်နဲ. အီဂျစ်က ကောင်လေးများက Lady မ first ပါဘူးတဲ.။ Men and women are equal ပါတဲ.။ First come,first serve တဲ.။ ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်ဘဲ အသာလေး ငြိမ်ကုပ်ပြီ: ပြန်ခဲ.ရတယ်။ လူနည်:နည်: စဲတော.မှ ရှိတယ်. မိန်:ကလေးအုပ်စု ချီတက်သွားတော.မှပဲ စားရတော.တယ်။
Wal Mart သွားဖို့ Shuttleစောင်.တုန်းကလည်: မိန်:ကလေးမို့ ဦးစားပေးမယ် မထင်နဲ. လှည်.တောင် မကြည့်ဘူး။ သူတို.နဲ. ပြိုင်တို:ဖို. နေနေသာသာ အနားတောင် မကပ်နိုင်ဘူး ။ နောက်တစီးကို ၁၅ မိနစ်လောက် အအေးထဲမှာ စောင်.ပေတော.ပဲ။ အေးလွန်:လို့ နာရည်တွေ ကျလာတာ ပြန်ရောက်တော. Cevit သောက်ယူရတယ်။ အဲဒီကတည်:က စလို့ MUM MSCSက Gentleman များဟာ Dinning Hallထဲမှာသာ Gentleman ပါတယ်။ Lady first ကလည်: Dinning Hall မှာသာ lady first တာ တခြားနေရာမှာ lady မ firstပါဘူးလို့ တို.များကလည်: အတင်းတုတ်ပါတယ်။
ယောက်ျား၊ မိန်:မ ၂ယောက်လုံး အလုပ်လုပ်မှ စားရတယ်. ခေတ်ကြီ:ထဲမှာ မိန်:မက အလုပ်က ပြန်လာရင် ချက်ပြုတ်ပြီ: အလုပ်များနေသလောက် ယောကျာ်းဖြစ်သူကတော. အိမ်မှုကိစ္စ ငါနဲ. မဆိုင်ဆိုပြီ: နေတယ်.သူမျိုး ရှိသလို မိန်:မကို ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးတယ်. သူမျိုးလည်: ရှိပါတယ်။အိမ်မှုကိစ္စ ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးတယ်. ယောကျ်ားကိုရတယ်. မိန်:မဟာ တကယ် ကံကောင်းတာပဲ။ အိမ်မှုကိစ္စ ငါနဲ. မဆိုင်ဆိုပြီ: နပ်နေတတ် တယ်. ယောကျာ်းလေးများကို မြင်ရ၊ကြားရတယ်. အခါ ပြောလိုက်ချင်ပါတယ် "Yes. Men and women are equal. But men are more equal." လို့ ။
မတ် ၁၉၊ ၂၀၁၁။
အခု ဂျပန် ဆူနာမီ သတင်းက တကမ္ဘာလုံးကို ဂရက်ရိုက်စေပါတယ်။မီဒီယာတွေရဲ. ကျေးဇူးကြောင့် ဂျပန် ငလျင်ရဲ. ပြင်းထန်မူ၊ဆူနာမီ လှိုင်းလုံးကြီ:တွေရဲ. အဖျက်စွမ်:အား ကြီ:မားပုံ၊ဂျပန် ပြည်သူတွေရဲ. ဒုတ်ခတွေကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့ခဲ.ရတယ်။ ငလျင်၊ ဆူနာမီ အပြင် နျူကလီးယား ဓာတ်အားပေး စက်ရုံက ပြဿနာတွေကြောင့် ဂျပန်ပြည်သူတွေမှာ တပူပေါ် နှစ်ပူဆင့်။ ငလျင်လှုပ်တုန်း ကျင်းပနေတယ်. အစည်းအဝေးကို ချက်ချင်း ရပ်ဆိုင်းပြီ: ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် နာအိုတို ခန် ကိုယ်တိုင် စီမံခန်.ခွဲတယ်။711 လို အစားအသောက် ဖြန်.ဖြူ:တယ်. companyတွေလည်: vending machine မှာရှိတယ်. အစားအစာတွေကို ပိုက်ဆံပေ:စရာ မလိုဘဲ ယူစားခွင့် ပေးတယ်။လိုက်နာရမယ်. နည်းလမ်:တွေကိုလည်: ဂျပန် ဘာသာတင် မကဘဲ ဘာသာပေါင်းစုံနဲ. တောက်လျှောက် ကြေညာတယ်။ ငလျင်ခိုပြီ:လို့ ပြန်သွားကြရင်လည်: အမှိုက်တစမှ မကျန်ခဲ.ဘူး။အစားအစာတွေ စုဆောင်းဖို.တောင် စနစ်တကျ တန်:စီကြတယ်။ လုရက်တာ၊ခိုးတာ မရှိဘူး။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်က ရေဒီယို သတ္တိကြွသတင်းကို ချက်ချင်း အကြောင်းမကြားလို့ ဓာတ်အားပေး ကုမ္ပဏီကို ဆူတယ် ဆိုပဲ။တကယ် အလုပ်လုပ်တယ်. အစိုးရနဲ. စည်:ကမ်:ရှိတယ်. ပြည်သူတွေကို မြင်တာ စိတ်ချမ်:သာစရာပါ။ (တို.များ အစိုးရနဲ. ကွာပါ့နော်)။ ဂျပန်ဟာ ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးသွားပေမယ်. မကြာခင် အရင်လိုပဲ အင်အားကြီ:နိုင်ငံ ဖြစ်လာမှာပါ။
ဗီယက်နမ်သူကတော. သူတို.ဆီမှာ တပါတီပဲရှိလို့ နိုင်ငံရေးအရှုပ်အထွေး မရှိပါတယ်.။ဒါပေမယ်. အလုပ်ကို အသက်ထွက်မတတ် လုပ်ရပေမယ်. ရတယ်. ပိုက်ဆံက နည်:တော. အများစုက နိုင်ငံခြား ထွက်ရပါသတယ်.။တရုတ်ကျောင်းသားတွေကတော. တရုတ်အစိုးရက တိုးတတ်တယ် ပြောနေမယ်. ပေါက်ဖော်တွေကတော. နိုင်ငံခြားကို နည်းမျိုးစုံနဲ. ထွက်ဖို. ကြိုးစားရပါတယ်တဲ.။ တရုတ်အစိုးရကို မကြိုက်တယ်. အကြောင်း ပြောပြတယ်။နို.မှုန်.အတု ဆိုတာ တကယ်လားလို့ မေးတော. နို.မှုန်.ဈေးက ကြီ:တော. ဆိုင်ရာဆိုင်ရာတွေကို ပိုက်ဆံပေးပြီးတော. ဖြန်.တာပါတယ်. ။ ကြက်ဥအတုကတော. ကောလဟာလပါ။ တရက်ပဲ ခံတော. အပြင်ကိုဖြန်.လို့ မရပါဘူးတယ်.။၂လ ၃လ ဆရာဝန် သင်တန်:တတ်ပြီ: ရမ်:ကုဆရာဝန် ပေါတာတော. အမှန်ပါတယ်.။ တယောက်ယောက်က မတရားလုပ်တာ တွေ့တာအောင် ဘာမှ မတွေ့ဘူး၊ ဘာမှ မမြင်ဘူးလို့ ဘူးခံရသတဲ.။ ဆွဲစိခံရမှာ စိုးလို့ (မြန်မာပြည် အတိုင်းပါလားနော်)။ Internetမှာ Liu Xiaobo (နိုဘယ် ငြိမ်:ချမ်:ရေးဆုရှင်၊ လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ၊ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရသူ) လို့ ရှာလို့ မရအောင် ဘမ်:တယ်။ Facebookကိုလည်: ဘမ်:တယ်။ဟေ့ ငါတို. အစိုးရက နင်တို.လောက် မဆိုးဘူး Facebookကို မဘမ်:ဘူးဟ လို့ ပြောလိုက်တော. နင်တို. အစို:ရက Facebookကို မသိသေးလို့. ဖြစ်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ကို မဘမ်:နိုင်သေးတာ ဖြစ်မယ်တယ်.။
နီပေါသူလေးကတော. သူတို.ဆီက အစိုးရဆန်.ကျင်ဆန္ဒပြသူတွေ အစိုးရက နှိမ်နင်းပုံအကြောင်းလေးကို ဒီလိုပြောပြပါတယ်။ လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ပါတီပေါင်းစုံ၊ဘာသာပေါင်းစုံ နေထိုင်ကြတယ်. နီပေါမှာလည်: ပြသာနာတွေကလည်: များသား။ သပိတ်မှောက်လို့ ဘတ်စ် ကားတွေမပြေးလို့ ရုံးကို လမ်:လျှောက်ရ၊ ဆန္ဒပြတယ်. နေရာကို ရေ၊မီး ဖြတ်၊ ဆန်ဒပြသူတွေကို မျက်ရည်ယိုဗုံးနဲ. လူအုပ်ခွဲတယ်. အကြောင်း ပြောပြတယ်။တို. မြန်မာပြည်မှာတော. မျက်ရည်ယို ဗုံးသာမက ဘုရားနဲ. တဂုဏ်:တည်:ထားတယ်. သံဃာကို သေနတ်နဲ.ပါ ဆော်တာ လို့ပြောတော. "Oh My God ! Ur government is worse than ours." တဲ့။ ပြိုင်နေကြတာ ဘယ်အစိုးရက ပိုဆိုးတယ်. အကြောင်း။ Singapore အစိုးရကိုသာမက မြန်မာအစိုးရကို တလ ၈၀ ကနေ ၁၂၀ ဆောင်ရတယ်၊ သက်တမ်:တိုးရင် ၃၀၀၊ အခွန်မဆောင်ရင် သက်တမ်:မတိုးပေး၊ဘယ်သွားသွား ဗီဇာလိုတယ်. အကြောင်း ပြောပြတော."Myanmar people are rich." တယ်.။ မြန်မာပြည်သူတွေက မချမ်:သာပါ အစိုးရကသာ ချမ်:သာတာ။ Manchester Unitedကို ဂျိုကုပ်မှူးကြီ:မြေးက ဝယ်ဖို. ကြံစည်သေးတယ် နာဂစ်မုန်တိုင်း တိုက်လို့ ပြည်သူတွေ ဒုတ်ခရောက်နေတုန်း ဝယ်ရင် ကျော်မကောင်းကြားမကောင်း ဖြစ်မှာစိုးလို့ လက်လျှော.လိုက်တယ်. ဝီကီလစ် သတင်းကို ပြလိုက်တော. "တော်တော် ချမ်:သာတာပဲ၊ Singaporeက tycoonတောင် မဝယ်နိုင်ဘူးတယ်."။
Hong Kongကို အဝင် Immigrationမှာ ဆယ်မိနစ်လောက် တခွန်:မှ မမေးဘဲ Passportကိုဖင်ပြန်ခေါင်းပြန် စစ်နေတာ နောက်က တန်:စီတယ်. အန်တီကြီ:က ဘာလူမျိုးလဲတယ်.။ ရွှေမြန်မာဆိုတာလည်: သိရော တချိုးတည်: လစ်တော.တာပဲ။ ရွှေမြန်မာဆိုရင် ကြာလို့တယ်. တခြားလိုင်းမှာပဲ သွားစီတော.တယ်။ Macau Immigrationမှာလည်: တခြားလူမျိုးတွေ အားလုံး Arrival Visa ကို free။ သိတော် မူတယ်. အတိုင်း ရွှေမြန်မာကတော. ၁၀၀ ပေးမှ Arrival Visa ရတော် မူတယ်။ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ဂုဏ်ယူရပါလား ရွှေမြန်မာရယ်။ အလကားရတာ မသုံးနဲ. ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီ:ဌာန ဝင်ငွေတို:အောင် ပိုက်ဆံပေး သုံးကြပါတဲ.။ အင်း ဒီလို ခေါင်းမရှိတယ်.၊ပြည်သူတွေ သက်သာအောင် မလုပ်ပေးဘဲ ပြည်သူတွေဆီက ငွေညှစ်ထုတ်နေတယ်. စစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်နေသရွေ့ မြန်မာပြည် ဘယ်တော.မှ တိုးတတ်မှာ မဟုတ်ပါ။ စစ်တိုက်ဖို.ပဲ သိတယ်.၊ညှိနှိုင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဆိုတာ မသိတယ်.၊အမိန့်ကိုပဲ နာခံတတ်တဲ့စစ်သားတွေက တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်နေတော.လည်: ခက်သားလား။ တတ်သိနားလည်သူတွေ အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတော.လည်: လက်မခံ။မင်းဆိုးမင်းညစ် ဒုက္ခမှ မြန်မာပြည် အမြန်ဆုံး ကင်းဝေးပါစေ။ အာဏာရှင်စနစ် ကျဆုံးပါစေ။
မတ် ၁၇၊ ၂၀၁၁။
စကင်္ာပူမှာနေတော. ရန်ကုန်ကို လွမ်:တယ်။ ရန်ကုန်မှာနေတော. စကင်္ာပူကို လွမ်:တယ်။
စကင်္ာပူရော၊ရန်ကုန်မှာရော မနေတယ်.အခါ စကင်္ာပူရော၊ ရန်ကုန်ရော နှစ်ခုလုံးကို လွမ်:တယ်။
တယောက်တည်: စကားပြောဖော် မရှိဘဲ ပြတင်းပေါက်ကနေ အပြင်ကို ငေးကြည်.ရတိုင်း၊ စားမဝင်တိုင်း၊ ရာသီဥတု အေးလွန်:တိုင်း၊ရင်ဖွင့်ရမယ်. သူငယ်ချင်း မရှိတိုင်း၊ ဘယ်မှ သွားလည်စရာ မရှိ ဂူအောင်းနေရတိုင်း၊မိသားစုနဲ. မိုင်သောင်းချီဝေးတယ်. ဟိုးအဝေးကြီ:မှာလို့ ခံစားရတိုင်း၊မြန်မာစကားကို လွမ်:မိတိုင်း တယောက်တည်:ပါလား ခံစားချက်က ဝမ်:နည်:စေတယ်။
မျှော်လင့်ချက်တခုအတွက် ပေးဆပ်ရတယ်. တန်ဖိုးက ကြီ:မားတယ်။
အရိုးပြိုင်းပြိုင်းနဲ. အရွက်မရှိတယ်. သစ်ပင်တွေကို မြင်ရတိုင်း အမြဲစိမ်:စိုနေတယ်. သစ်ပင်တွေကို လွမ်:တယ်။
အေးစက်တယ်. နှင်းတွေ မြင်တိုင်း ပူနွေးတယ်. နေရောင်ခြည်ကို လွမ်:တယ်။
ပေါ့ရွှတ်တယ်. အစားအစာတွေ စားရတိုင်း အရသာရှိလှတယ်. ကိုယ်.တိုင်ပြည်အစားအစာကို လွမ်:တယ်။
ကိုယ်ပိုင်ကားတွေ စီးရတိုင်း mrt နဲ.bus ကို လွမ်:တယ်။
ကိုယ်.ဘေးနား လူအများကြီ:ရှိပေမယ်.လည်: တယောက်တည်:လို့ ခံစားရတယ်. အခါ မိသားစုကို လွမ်:တယ်။
အမြဲ ဗိုက်ဆာနေတယ်.အခါ အမြဲတမ်:ဗိုက်ပြည်.နေတာကို လွမ်:တယ်။
SMS,PhoneCall,Gathering,Shopping ကို လွမ်:တယ်။
မျက်လုံးပြာတွေ ကြားထဲမှာ စပ်စုတတ်တယ်. မျက်လုံးနက်နက်တွေကို လွမ်:တယ်။
အဲ နောက်ထပ် ဘာများ လွမ်းစရာ ကျန်ပါသေးပါလိမ်....:P
မတ် ၇၊ ၂၀၁၁။
Anawrahta meets Shin Arahan ...